ရခိုင် ရှိ ကုလားအားလုံးနှင့်ပါတ်သက် ၍ banglapedia မှ ဖေါ်ပြချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရခိုင် ရှိ ကုလားအားလုံးနှင့်ပါတ်သက် ၍ banglapedia မှ ဖေါ်ပြချက်
ရခိုင် ရှိ ကုလားအားလုံးနှင့်ပါတ်သက် ၍ banglapedia မှ ဖေါ်ပြချက်
Posted by Knowledge Seeker on Jun 15, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
Arakanastate of Myanmar (Burma) situated on the northern and western parts of that country, which exerted considerable influence, both political and cultural, on the South and South-Eastern parts of Bangladesh from very early times. The Arakan Yoma,along mountain range, separates the rest of Myanmar from Arakan, which is bounded by the bay of bengal and the estuary of the river naf on the Southwest.
The ancient name of Arakan is ‘Rakhainepray’. The word Rakhaine is said to have derived from the Sanskrit Raksha and the Pali Yakkha, signifyingamonster orademon. Before the diffusion of buddhism, most Arakanese were worshippers of Nature.
Currently Arakan has four administrative units such as Sandoway, Sittway, Mayu and Kyaukpyu. Akyab is the capital city and the principal port of Arakan. It is situated at the mouth of the Koladan. Before the British occupation of Arakan in 1826, it wasasmall fishing village. Other major towns and ports are Kyaktaw, Maungdow, Buthidaung and Sandoway.
As is the case with the Bangalis, rice is the staple food of the Arakanese. The population is estimated at about two millions, of whom Buddhists constitute the significant majority. The rest of the population consists of Muslims, Hindus, Christians and animists. The Muslim community, who are next to the Buddhists in number, consists of four groups: Tambukias, Turko-pathans, Kamanchis and rohingyas. The Tambukias trace their history back to the eighth century when their ancestors from Arabia were allowed to settle in southern Arakan by the contemporary king Maha Taing Chandra (788-810).
The next group consisting of the Turks and Pathans are mostly found in the outskirts of Mrohaung, the last capital of Arakan. The Arakanese king Min Soa Muwn alias Narameikhla (1403-33) recaptured his throne with the help of their forebears who were in the army of Bengal. Like the Tambukias, they were allowed to settle in Arakan by the grateful king. The ancestors of the kamanchis came in the train of shah shuja, the Governor of Bengal (1639-59), who took shelter in Arakan with his family and retinues after being overthrown by his brother aurangzeb. Their descendants are to be found mostly in Ramree Island. The Rohingyas are descendants of Muslims who hailed from chittagong. Now they are mainly concentrated in northern Arakan. Their migration in the past usually happened during the agricultural season when Arakan faced the problem of the shortage of agricultural labourers.
Because of her geographical proximity with the south-eastern parts of Bengal, Arakan developed both political and cultural relations with Bangalis. The political situation depended on the fluctuation of powers of the two countries. Taking advantage of the weakness of Sultan Barbak Shah of Bengal, Bosawpyu occupied chittagong district in 1459. Foracentury it remained in the hands of the Arakanese until they were expelled by the Mughals in 1666.
The impact of Muslim culture on the life of the peoples of Arakan had profound effects on the subsequent course of Arakanese history. Like the Pathan Sultans, the kings of Arakan patronised the cultivation of Bengali literature and many talented poets from different regions thronged to the Arakanese court. Many Muslim Bengali poets attended the Arakanese court. For example, Ashraf Khan held the post of war minister at the time of King Thadomentor (1645-52). Ashraf Khan was popularly known as ‘Uzir Laskar’. He wasapowerful minister and for his services the king awarded him one sword and some elephants.
After the fall of Chittagong in 1666, the kingdom of Arakan was reduced toasmall territory. Politically too, it became unstable. Murder of several kings blackened its history. Between 1731-1784 thirteen kings ruled Arakan. The average rule of each king exceeded not more than two years. In 1784, in the time of Bodawpaya (1782-1819), Arakan was annexed to the Kingdom of Burma, which in turn was madeapart of the British dominion in 1826. From 1942 to 1945 it was temporarily put under the occupation of Japan. Burma gained independence on4January 1948.
Immediately after Burma gained independence tension increased between the Arakanese Buddhists and the Muslim Rohingyas, resulting in the exodus ofalarge number of Rohingyas to cox’s bazar. The Burmese government claimed that the Rohingyas were relatively recent migrants from the sub-continent. The Burmese constitution, therefore, did not include them among the indigenous groups qualifying for citizenship. In March 1978, due to widespread arrests and expulsions by the Burmese government,alarge number of Rohingyas fled into Bangladesh.
Bangladesh received an influx of approximately 250,000 Rohingyas from Burma during 1991-1992. The exodus was triggered off byacomplex combination of political, social and economic factors and serious violation of human rights. Thousands of Rohingyas again fled to Bangladesh in 1996 and 1997. Around 200,000 of them had eventually returned to Arakan. According to some estimates, about 20,000 still remain in Bangladesh. This has created manyaproblem such as public discontent, environmental disaster, and smuggling in border areas, resulting inacolder turn in Bangladesh-Myanmar relations. [Sadat Ullah Khan]
ကမန် မှာ ရခိုင် နှင့် မည် သို့ မျှ မျိုး နွယ် မ ဟုတ် ပါ၊ Bangali ကပင် ၀န် ခံ ထား ပြီး ဖြစ်သည်။
Also please read the following reference
where you will find the Rohingyas mixed up all these islam believers as one in order to make upaconspiracy to buildastrong history background for Bangali Rohingyas. Indeed there arealot of several islam believers settlements in the Rakhine but they are not the same and different in origin as well as ethnically.
ကမန် ဟာ ရခိုင်မျိုးနွယ် ရယ်လို့ မပြောသာပါဘူး..။
ရခိုင်ဒေသက/ရခိုင်ဒေသမှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်တစုလို့ပဲသိထားတာပါ…။
ကမန်လူမျိးစု ဟာ ဒီမြေမှာ ရှေးအစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့တာမို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံမက တိုင်းရင်းသားလဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ကြည့်ရင်တော့ မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ တွေ့ဖူးတာပဲ..။
အသားမဲပြီး မုတ်ဆိတ်ပါတိုင်းတော့ ဘင်ဂါလီလို့ မပြောနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့…
တကယ်တော့ ဘင်ဂါလီတိုင်းလဲ ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်သေးဘူး…
နောက်ပြီးတော့ ကျုပ်တွေ့ဘူးတဲ့ ကမန်လူမျိုးတယောက်ကတော့ အသားမမဲဘူးနော်…
အဲဒါတွေ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ အခြေအနေတွေ အေးချမ်းသွားတဲ့တနေ့မှာ ဓါတ်ပုံတွေတင်ပြီး ရှင်းကြဘို့တောင်ကောင်းတယ်။
ရခိုင်ဒေသအရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ကတော့ သူတို့ သဘောထားကို ကြေငြာပြီ။
The Voice Weekly မှကူးယူဖော်ပြသည်..။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီများ၏ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်
ပတ်သက်၍ မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ၏ သဘောထား
မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဌာနချုပ်
အမှတ်(၂/၂/၂၃၂) မဟော်ဂနီလမ်း ၊ ထောက်ကြံ့တိုးချဲ့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊
ဖုန်း – ၀၉၈၆၁၀၇၁၉
ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၃) ရက်
၁။ မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး
တိုင်းတပါးသားများ ကျူးကျော် ၀င်ရောက် နေထိုင်ပြီး ဒေသခံ
တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်အိုးအိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို
နှောက်ယှက် ဖျက်စီးနေမှုများ ၊ မီးရှို့သတ်ဖြတ်နေမှုများ စသည့်
လုပ်ရပ်များအပေါ် မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ မှ ရပ်တည်ချက်
၂။ ဤဖြစ်ရပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် မူလနေ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သော
အခြားတိုင်းတပါးမှ လူမျိုး ကွဲများက မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ တဖြည်းဖြည်း
စိမ့်ဝင်နေထိုင်လာရာမှ နယ်မြေအပိုင်စိုးမိုးရေးအတွက် ကျူးကျော်မှုကို
ပေါ်ပေါ်တင်တင် အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာရာမှ
ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု မှတ်ယူ ပါသည်။ အဆိုပါ လူမျိုးကွဲ ဘင်္ဂါလီ
အကြမ်းဖက်သမားများက မူလနေတိုင်းရင်းသားများအပေါ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ပြီး
မနေထိုင်ဝံ့အောင် မောင်းထုတ်သည့် အပြုအမူများဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား
များ၏အိုး အိမ်များ ကိုမီးရှို့ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေသည်ကို
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတို့က သိရှိမှတ်သား စေလိုပါသည်။
၃။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကို
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သူအဖြစ်သို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များနှင့် ကုလသမဂ္ဂက
မှတ်ယူလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွန်းပို့နေသော လုပ်ရပ်များ
လုပ်ဆောင်နေသည် ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အရပ်သား အသွင်ဆောင်ထားသော
လုပ်ကိုင်ရခက်ခဲစေရန် အကွက်ချဖန်တီးမှုများ ထိုဘင်္ဂါလီများ၏
၀ါဒဖြန့်သတင်းဌာန များမှ သတင်းအမှားများ ဖြန့်ဝေနေခြင်းကိုလည်း
တွေ့ရှိရပါသည်။ မည်သည့်တိုင်းပြည်ပင်ဖြစ်စေ ဤကဲ့သို့ သော
နယ်မြေဆုံးရှုံးခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ သော အရေးယူမှုများ
ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်သည့်
အားလျှော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တိုင်းတပါးကျူးကျော်မှုရန်ကို
ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီမှ ထောက်ခံပါသည်။
၄။ အဆိုပါလူမျိုးကွဲ တိုင်းတပါးသားများ စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုကိုလည်း
အမြန်ဆုံးစိစစ်ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါ ရန်နှင့် တိုင်းတပါးသားများ
စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုအတွက် တာဝန်ပေါ့လျော့သူများ လုပ်ကိုင်စီမံမှု
ညံ့ဖျင်းသူများကို လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် သားများ၏
ဘ၀လုံခြုံရေးကို ရေရှည်အာမခံနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း
လူအများသိရှိနိုင်စေရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါရန်လည်း
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကနဦးနေထိုင်ကြကုန်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
အပေါင်းတို့အားလည်း အထူး အသိပေးလိုသည်မှာ ဌာနေအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များသည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရပြီးသော ဌာနေများ စာရင်းတွင်
ပါဝင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုသာ အခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
နှင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး ကို
ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သစ္စာစောင့်သိရမည် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ပါသောကြောင့်
နိုင်ငံခြားမှ ၀င်ရောက်လာသူ များအပေါ် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတူဟူ၍ ဘက်လိုက်
လိုက်ပါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုမိကြစေ ရန် အထူးအသိပေးအပ်ပါသည်။
၆။ ပြည်တွင်းရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မဟုတ်သော အခြားဘာသာများဖြစ်သည့်
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များသည်လည်း ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး
ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုမူဘဲ နိုင်ငံ သားအမြင်ဖြင့်သာ
စဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြပါရန် လေးနက်စွာ အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၇။ တိုင်းတပါးမှ ၀င်ရောက်လာသူများကိုမူ ဘာသာတူခြင်း/ မတူခြင်း၊
လူမျိုးတူခြင်း/ မတူခြင်း အပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားရမည်မဟုတ်ဘဲ
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း/ မဖြစ်ခြင်း ကိုသာ အခြေခံပြီး
ပြည်တွင်းဥပဒေများနှင့် အညီ စည်းကမ်းနည်းလမ်းတကျ လုပ်ဆောင်ကြပါရန်
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင်
ဖြစ်စေ ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြား တွင်ဖြစ်စေ မည်သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု/
နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု ကိုမဆို မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်
ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ မှ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရှုံချပါကြောင်း ကြေညာ
နောက်တစ်ခါ (မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ) ကိုပဲမဲပေးတော့မယ်။
ကြိုက်သွားပြီ အဲလို ရဲရဲရင့်ရင့်ကြေငြာ လိုက်စမ်းဘာာာာာာာာာာ။
၇ခိုင် မူစလင် ၇ုပ်နဲ့ ၇ိုဟင် ၈ျာ ဘင်္ဂလီ ၇ုပ်နဲ့ က တူကို မတူတာဘဲ မြင်တာနဲ့ ခွဲခြားသိ၇တယ်
ကမန် မှာ ရခိုင် နှင့် မည် သို့ မျှ မျိုး နွယ် မ ဟုတ် ပါ၊ Bangali ကပင် ၀န် ခံ ထား ပြီး ဖြစ်သည်။”
အချိန်ရတိုင်း လက်မ ဝင်ထောင်ပေးမည် ဟု ကတိပြုခဲ့ပါသည်။
မူစလင်လူမျိုးများဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာလူမျိုးပြီး ရင်လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အုပ်စု လေး စုပါဝင်ပါသည်။
Tambukias, Turko-pathans, Kamanchis နှင့် rohingyas တို့ဖြစ်ပါသည်။
Tambukias တို့ သမိုင်းမှာ ၈ ရာစု တွင် အာရေဗီးယ မှ ရောက် ရှိ လာ ပြီး မဟာတိုင်းစန္ဒျ မင်း ( ၇၈၈-၈၁၀ ခုနှစ် ) က ရခိုင် တောင် ဘက် ပိုင်း တွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုထား သော အာရပ်လူမျိုးများမှ ဆင်းသက် လာသူများဖြစ်သည်။
ဒုတိယအုပ်စု( Turko-pathans ) မှာ တူရကီ နှင့် ပဌာန် လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး မြို.ဟောင်း မြို.ဆင်ခြေဖုံးတွင်နေထိုင်ကြသည် ကို တွေ့ရသည်။ ရခိုင်ဘုရင်မင်း စောမွန် ခေါ် နရမိတ်လှ ( ၁၄၀၃-၃၃ ခုနှစ်) က ဘင်္ဂါလီစစ် တပ်တွင်အမှူထမ်းသော၎င်းတို့၏ အဘိုးအဘေးများ အကူအညီ ဖြင့် ပြန်လည်ထီးနန်း ရနှိုင်ခဲ့ သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်သည့် အနေဖြင့် ၎င်းတို့ကို Tamukias များ ကဲ့ သို့ နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကမန်များ( Kamanchis ) ၏ဘိုးဘေးများ မှာ ဘင်္ဂါလီဘုရင်ခံရှားရှုဂျာ ( ၁၆၃၉-၅၉ ခုနှစ် ) နှင့် ပါလာသူများသာဖြစ်ပါသည်။၎င်းဘုရင်ခံသည် ညီအစ်ကိုတော်သူ အော်ရမ်းဇက် ဘုရင်ကနန်းချခံရပြီးနောက်ရခိုင်သို့ မိသားစုလိုက် ပြေးဝင်ခို ပုံးခဲ့ သူဖြစ် သည်။၎င်း အဆက်အနွယ်များကို ရမ်းဗြဲး ကျွန်း တွင် တွေ့ရ သည်။
ရိုဟင်ဂျာ( Rohingyas ) များမှာ စစ်တကောင်း မှရွေ့ပြောင်းလာသူမူဆလင်အဆက်အနွယ်များဖြစ်သည်။ယခုအခါရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။
အတိတ်က၎င်း တို့၏ပြောင်းရွေ့မှု များ မှာ စိုက်ပျိုးရေးရာသီတွင် လုပ်သားလိုအပ်ချက် ကြောင်. ဖြစ်ပေါ် လေ့ရှိသည်။
ဟုတ်ပါပေသည် ၊ မှန်ပါပေသည် ၊ သင့်မြတ်လှပါပေသည် ။
↑ မောင်ဆန္ဒ(လယ်ဝေး) ကမန်မျိုးနွယ်စုသမိုင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(နိုင်ငံဂုဏ်ရည်စာပေတိုက်)ကုန်သည်လမ်း၊ စာပေဗိမာန်၊ ရန်ကုန်မြို့။
“”မြန်မာ အစိုးရသတ်မှတ်သည့် လူမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ””
ကချင် – တရုမ်း – ဒလောင် – ဂျိမ်းဖောလူမျိုး(သိန်းပေါ်၊ ဂျင်းဖော) – လော်ဝေါ်(မရူလူမျိုး) -ရဝမ်လူမျိုး- လာချိဒ်- လီဆူလူမျိုး- ဇိုင်ဝါး- ဂေါ်ရစ် – ခါ့ခူးလူမျိုး – ဒုရင် – လရှီလူမျိုး – အဇီး
ကယား(သို့)ကယန်း – ဇယိန်လူမျိုး – ပဒေါင်လူမျိုး – ဂေခို – ဂေဘား – ပရဲလူမျိုး – မနူမနော် – ယင်းတလဲ – ယင်းဗော်လူမျိုး
ကရင် – ကရင်ဖြူ – ပလေကီး (ပလေချီ) – မွန်ကရင် – စကောကရင် – တလှေပွာ – ပကူး – ဘွဲ – မောနေပွား – မိုးပွ – ပိုးကရင်
ချင်း – ကသည်း – မယ်တိုင် (ကသဲ) – ဆလိုင်း – ကလင်ကော (လူရှေ) – ခမီ – အောဝခမီ – ခေါနိုး – ခေါင်စို – ခေါင်ဆိုင်ချင်း – ခွာဆင်းမ် – ခွန်လီ (ဆင်မ်) – ဂန်တဲ့ (လင်တဲ) – ဂွေးတဲ – ငွန်း – ဆီစာန် – ဆင်တန် – ဆိုင်းဇန် – အရှိုချင်း – ချိုး – ခမီ – လိုင်မီး – – ဇိုမီး – မီဇိုး – ဇာဟောင် – ဆိုင်းတန်လူမျိုး – ဇိုဖေ – ဇို – ဇန်ညှပ် – တပေါင် – တီးတိန် (တဲဒင်မ်) – တေဇန် – တိုင်ချွန်း – တာ့ဒိုး – တောရ် – ဒင်မ် – ဒိုင်လူမျိုး – နာဂ – မာရင် – ပနမ်း – Magun – မတူ – မီရမ် (မရာ) – မီအဲ – မကန်း – လူရလူမျိုး၊လူရှိုင်း (လူရှေ) – လေးမြို – လျင်းတု – လောက်ထူ – လိုင် – လိုင်ဇို – ပါကင်းမ် – ဟွာလ်ငို – အနူး – အနန် – အူပူ (မရို) – လျင်းတု – အရှိုချင်း – ရောင်ထု
ဗမာ – ထားဝယ် – မြိတ် – ယော – ရဘိန်း – ကတူး – ကနန်း – ဆလုံလူမျိုး – ဖွန်း (ဖုန်း)
ရခိုင် – ကမန် – ခါမီ – ဒိုင်းနက် – မြို – သက်
ရှမ်း – ဓနောလူမျိုး – ဓနုလူမျိုး – အိုက်ဆွယ် – အင် – ဂုံလူမျိုး(ခွန်) – အင်းသား – ကော် (အခါအိကော) – ခန်တီးရှမ်း – ခမူ – ကိုးကန့် – ကွီ – လားဟူ – မိုင်းသာ – မြောင်ဇီး – မောရှမ်း – ပလောင် – ပလေး – ပအိုဝ်း(တောင်သူ) – ဖျင် – ရှမ်းကလေး – ရှမ်းကြီး – မုံလူမျိုး – တိုင်းလွယ် – တိုင်းလျမ် – တိုင်းလုံ – တိုင်းလေ့ – တောင်ရိုး – ဝ – ယောင် – ယင်ကျား – ယင်းနက်လူမျိုး – ယွန်း
ရဲဘော် မောင်တူး says:
တဲထဲဇွတ်ဝင်ချင်တဲ့ သစ်ကုလားအုတ် ကို တဲပိုင်ရှင်လုပ်သလို ၊ လုပ်လိုက်ရမှာပါ ။